Eva Evha Mhuri Mat Fekitori - China EVA Mhuri YeMata Mat Vagadziri, Vatengesi
Furo pasi bonde kusona paving pasi yekurara vana chipanje bonde rinokambaira imba imba yekugarira yekutandarira pikicha
Yakapfava uye yakapfava yekumonera kapeti Gadzira chinyararire uye chakasununguka chengarava Chigadzirwa zita: kupaka kapeti Chigadzirwa chevaravara sarudzo yakawanda Chigadzirwa chigadzirwa: Shu donje velvet Chigadzirwa kutarisirwa: kukwesha kunoitwa muChina Chigadzirwa maratidziro: senge sarudzoMaitiro ekushandisa: yekurara / yekugara imba yekupinda horo / bay hwindo, nezvimwewo Ruvara rwunoenderana, neruvara rwunoenderana, Random mechi Rima grey + beige Rima dzvuku + beige Pr ...
Floor furo evha pasi bonde Yakakora furo pasi pasi bonde Huru suede pasi mat
Makobvu ekusona epasi mateti, matsamba anokambaira, furo bhuru repasi mats, imba yekutandarira uye yekurara yakazara dzimba dzekuvata
Yakanakisa kuchengetedza kwezvakatipoteredza zvinhu
Zvichida EVA zvinhu, zvine mukana wakanaka wekuchinja, yerabha-senge kusimba,
Yakanaka pamusoro gloss uye inopokana-kukwegura, iri sarudzo yakanaka yehupenyu hwepamba
Eva velvet bonde mucheche dambanemazwi kapeti furo suede mats vana kutamba gumbeze yekurara mosaic pasi mats
Kusona puzzle kapeti pasi matawi vana vanokambaira mutambo mameti furo EVA pasi pemeti yekurara imba yekutandarira izere nemasutu mats
Nhare yevana yekunze kwekunzwa kudzidzisa makuru uye madiki evana masiraidhi kamuri yekutamba nhabvu
1. Kune mhuri dzinonzwa hwema, zvinokurudzirwa kuvhura pasuru yacho nekuishandisa mushure mekunge hwema hwapera. 2. Ndokumbirawo uteedzere giya ichiparadzira, iwe unogona kugadzira chero yekusanganisa musanganiswa.
3. Zvinorambidzwa kuburitsa pachena kuzuva, uye inogona kucheneswa netowel yakanyorova mushure mekusvibiswa.
4. Kushandiswa kwenguva refu kuri nyore kukonzera kunamatira pasi. Inokurudzirwa kuti ubatanidze bonde remhepo kufefetera mune ingangoita mwedzi. 5. Chenjera kuti usapinda mumuromo wevana, zvinogona kukonzeresa njodzi yekudzimbirwa.
6. Inofanirwa kushandiswa munzvimbo yakagadzikana uye yakagadzikana, kumucheto kwematanho, nezvimwe zvinogona kukonzera kudonha.
Yakakwira-density zvinhu zvakasimbiswa dhizaini, hunyoro-chiratidzo uye inotonhorera
Kukwirira kwakanyanya uye kusimba, hunyoro-chiratidzo uye inotonhorera-proof ukobvu ndizvo chaizvo
Pedyo nepasi pevhu kusimudzira kukura kwefupa remwana
Eva Foam Sports Mat Nhema Gym Mat Foam Floor Mat Tatami Puzzle Mat EVA Interloacking Jigsaw Puzzle Mat pamwe
Tine huwandu hwakasiyana hweTaekwondo mat, puzzle puzzle, iyo inoumbwa nemhando yepamusoro yezvinhu zvakasvibirira kuona kuchengetedzeka kwakanyanya kwevatambi. Inopa kunyaradzwa kwakakwana kune vatambi kana vashandisi. Matai aya anoitwa bvunzo dzemhando yepamusoro kuona kuti ari kutevedza zvinodiwa nenyika dzepasi rose. Zvigadzirwa zvedu zvinowanikwa mumisika pamakwikwi emitengo.
Kupatsanura kapeti yekurara izere shopu imba block pikicha yepamusoro eva kuchengetedza kwezvakatipoteredza furo pad
1.Environmental zvine hushamwari uye isiri-chepfu
Yakakwira-simbi yekuchengetedza zvakatipoteredza PE zvinhu, isina-chepfu, isina hwema, isina-inogumbura hwema
2. Isina mvura, iri nyore kuchenesa
Unyoro husingagadzirisike tekinoroji uye zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvinoita kuti mat isukwe nyore nesipo nemvura.
Mats anosemwa neisina-kutedzemuka pateni
4. Mhando yepamusoro
Nekushandisa yepamusoro Eva mat, hazvisi nyore kuremara
5. Mutengo wefekitori
Isu tiri mugadziri weEva mat, mutengo wakachipa kwazvo
Kupfava Tamba Dzidzo EVAIye Puzzle Kamuri Floor Mat yevana
2) Kunaka kwemvura kwakanaka, kutora guruva uye kuita-skid kuita;
(3) Zviri nyore kuchenesa, kujairira kuwacha uye kuwacha mawoko, hazvizove zvakaremara, hazvizodonhedze bvudzi, hazvizodzima, uye pamusoro peglue hazvizoburitswe kuzuva rakananga;
(4) Chigadzirwa hachina hwema hunoshamisa, chakapfuudza kuongorora kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kwenyika, uye chigadzirwa chisina kuongororwa.
(5) Hapana kupera, kurira kweabrasion pamusoro pegiredhi 4, kusuka kutsanya pamusoro pegiredhi 3.
1. Kana mamiriro ekunze akanaka, chiburitse muzuva kuti uzvidzivirire, wozviisa mumba kwenguva yakareba. Kana ikasangana nemhepo ine hunyoro, zviri nyore kuumba.
2. Dry it pakarepo mushure mekushambidza kuti iome.
3. Kana ikasangana netsaona nemimeograph, pendi kana muto, inofanirwa kucheneswa nekukasira kuti ive yakachena uye ichidzivirira kunhuwirira kunoshamisa.
Mapuzzle evana epasi, matsi epasi, matete ekukwidza emakamuri ekurara, mamaki anokambaira uye ekumonera matawi epasi
Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, AMP Mobile Floor Mat Puzzle, Yepasi Yekunze Exercise Mat, Floor Puzzle Mat Cushion, Floor Furo Rakajeka Mat, Floor Furo Rakajeka, Floor Rakajeka, Zvese Zvigadzirwa